किन पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ?
Home स्वास्थ्य किन पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ?
पथ्थरी भनेको के हो ? के कारणले पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ र पथ्थरी भएको कसरी थाहा पाउने । वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट शल्यचिकित्सक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवका सल्लाह र सुझाव यस्ता छन् … कलेजोको फेदमा सानो थैलो जस्तो हुन्छ यसलाई नै पित्तथैली भनिन्छ । पित्तथैलीको काम पित्तथैलीले पित्तलाई कडा बनाउनको साथै पित्तको भण्डार गर्ने र खानामा आएको चिल्लो पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । कलेजोको फेदमा सानो थैलो जस्तो हुन्छ यसलाई नै पित्तथैली भनिन्छ । पित्तथैलीको काम पित्तथैलीले पित्तलाई कडा बनाउनको साथै पित्तको भण्डार गर्ने र खानामा आएको चिल्लो पदार्थलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।
पित्तथैलीमा पत्थरी हुने कारण पित्तथैलीमा पत्थरी हुने यकीन कारण थाहा नभए पनि लवण,राता रत्तकोषहरु आदि नासिएर बनेका कणहरु पित्तथैलीमा जम्मा भएर लामो समय बस्दा स्राहो हुन्छ यसलाई नै पथ्थरी भन्निछ । पित्तको संरचनामा परिवर्तन, अस्वस्थ खानपान, मधुमेह, रगत सम्बन्धी रोग आदिको कारणले पित्तथैलीमा पत्थरी हुन्छ । लक्षण के–के हुन् ? यो रोग लागेपनि लामो समय कुनै लक्षण देखा नपर्न सक्छ ।
१. पित्त उत्पादनमा कमी हुने भएकाले खाना अपच हुन्छ । २. बोसो भएको खानेकुरा खादा पेट पोल्ने, घोच्ने आदि समस्या हुन्छ । ३.पेट दुख्ने । (विशेष गरेर दाँया भाग ) ४. पत्थरी भएको लामो समय भए शरीरको दाँया भाग दुख्ने हुन्छ ।(हात, खुट्टा,कम्बर) ५.वाक्वाकी लाग्ने । पत्थरी हुँदा किन दुख्छ ? कलेजोबाट पित्तासयमा लगातार पित्त आउँछ ।
यसरी आएको पित्त आवश्यक्ता अनुसार पित्तासयबाट बग्दछ । पित्तसयसंगै पत्थरी पनि बग्न खोज्छ । तर साह्रो भएकाले बग्न नसक्दा पित्तासयको मुखमा ठोकिन्छ र दुख्छ । कसलाई हुन्छ पथ्थरी ? यो रोग सबै लिंग र उमेर समुहका मानिसमा हुन्छ । तर ४०,४५ वर्ष उमेर पार गरेका महिलामा यो रोग बढी देखिन्छ ।
यस रोगका रोगीले बढी चिल्लो र मसलादार खाना खानु हुदैन् । उपचार के हो ? यसको सबैभन्दा उत्तम उपचार पद्धति भनेकै शल्यक्रिया गरेर पथ्थरी झिक्नु हो । यो रोगको बेलैमा उपचार भएन भने क्यान्सरसम्मको खतरा हुन्छ । त्यस कारण कुनै लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्दछ ।
आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नू : अध्यक्ष प्रचण्ड
स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण निःशुल्क